★မြန်မာ့အလင်း★: Allahက မွတ်ဆလင်တွေကိုပဲ ဒုက္ခနဲ့ သောကတွေ ပေးပါတယ်
လူ့ဘ၀ရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုတွေကို Allah တစ်ကောင်က စီမံနေတယ်လို့ မွတ်ဆလင်တွေက လက်ခံထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကောင်းတာတွေ ခံစားရတဲ့အချိန်မှာ Allahကို ကျေးဇူးတင်ကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အဆိုးတွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ Allahကို ဆဲရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပါပဲ။ နေ့စဉ် လမ်းဘေးမှာ ခွေးသေ၀က်သေဖြစ်နေတာလဲ မွတ်ဆလင်တွေချည်းပဲမဟုတ်ပါလား? ဒါပေမယ့် သူတို့မဆဲရဲပါဘူး။ အဲဒီအချိန်မှာတော့ တခြားလူတွေကို အပြစ်တင်ပါတော့တယ်။ တကယ်တော့ အဲဒီလူတွေကို ဖန်ဆင်းထားတာ Allah ပဲ မဟုတ်ပါလား?
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 8:58 AM
မအေလိုး ကုလားတွေ မအေလိုး မွတ်ဆလင် စောက်သုံးမကျ ကျက်သရေကို တစ်စက်မှမရှိဘူး ခွေးလိုးအလ္လာလ်